Antivirus | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Microsoft Security Essentials Definition Update June 3, 2016 By CHAN LAY (MCMM)
3 ရက်နေ့ ကမှ နောက်ဆုံး ထွက်ရှိထားတဲ့ MSE Updated Files ကိုရယူရန်။
မျှဝေသူ U Oo Cracker မှာ Saturday, June 04, 2016 1 comment:
ကျွန်တော် ဒီတစ်ခါ ESET NOD32 Antivirus ရဲ့ နောက်ဆုံး Update လေး တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ Download အဆင်ပြေအောင် တင်ပေး ထားပါတယ်
နောက်ပိုင်း Software တွေကို Update မှီအောင် ကျွန်တော် တင်တင်ပေး သွားပါ့မယ်။
အသုံးပြု လိုသူများ အောက်မှာယူသွား လိုက်ပါခင်ဗျာ ...
Active Antivirus NOD32
နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ
Bitdefender Mobile Security 2.40.774 for Android
Android ဖုန်း ကိုင်ဆောင် သူများ အတွက် viruses ကို အကောင်းဆုံး ကာကွယ်ပေး နိုင်တဲ့ Bitdefender Mobile Security နောက်ဆုံး ထွက်လေးကို တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
ဒီကောင်လေး ကတော့ viruses ကို 100% အထိကို ကာကွယ် ပေးနိုင် ပါတယ်။ PC ထဲမှာ ဆိုရင် နာမည်ကြီးပါ။
Current Version : 2.40.774
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, May 02, 2015 1 comment:
ကဏ္ဍ Android, Antivirus, Phone Application, Security
သင့်ဖုန်းကို ဗိုင်းရပ် ရန်က ကာကွယ် ပေးနိုင်တဲ့ - Antivirus Pro—Android Security v7.0.00.00 Apk ဗားရှင်း အသစ် လေးပါ အောက်မှာ အသုံးပြု ပုံလေးပါ ပြထား ပါတယ်။
The best phone security app!
AV-TEST certified engine provides thorough virus and privacy protection.
Antivirus Pro—Android Security v7.0.00.00 Apk |
Resumable Links |
Avira Internet Security Suite 2015 + 5Years License (Sept-2020 License Key )
Avira Internet Security Suite 2015 အသစ် ထွက် လာလို့ ထပ်ပြီး တင်ပေး လိုက် ပါတယ်။ ကွန်ပြူတာ တစ်လုံးမှာ Antivirus ဆိုတာက မရှိ မဖြစ် ထည့်သွင်း ထားဖို့ လိုကို လိုအပ် ပါတယ်။ Avria ကတော့ ကျွန်တော် သဘော ကျတဲ့ Antivirus တွေ ထဲမှာ အကြိုက်ဆုံး လို့လည်း ပြောလို့ ရပါ တယ်။
Antivirus ထဲ မှာ Avria ကိုတော့ ကျွန်တော် လုံးဝကို Recommend ပေး တယ်ဗျာ။ Virus တွေ ကိုတော့ အတော် လေးကို ရှင်းတဲ့ ကောင်ဗျာ။ Trojan, Worms, Malware, Spyware, Autorun, စတာတွေ အပြင် အခြားသော Viurs အတော် များများ ကို သတ်ပေး နိုင်ပါတယ်။
မိမိရဲ့ ကွန်ပြူတာ အတွင်းမှ Virus များကို သာမက Network ချိတ်ဆက် ထားရင်လည်း Network ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ Antivirus များကို လည်း ဖယ်ရှား ရှင်းလင်း ပေးနိုင် ပါတယ်။ License အတွက် ကတော့ မပူပါနဲ့ 2020 အထိ 5နှစ်စာ လိုင်စင် ပါပြီး သားပါ။ စိတ်ကြိုက် အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်။
အသေးစိတ် ကိုတော့ အောက်မှာ ဆက်လက် လေ့လာ နိုင်ပါ တယ်။
▼ Avria Trial Version ▼ OR ▼ Sept-2020 License ▼
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, March 02, 2015 1 comment: